Daawo Muuqaalka Nimco Dareen Oo Masraxa Laga Tuurayo iyado Hees Qadaysa - iftineducation.com
iftineducation.com – Fananada Nimco Dareen, ayaa laga helay muuqaal cadayn u ah dhibatadi ku gartay 24 August ee sanadkaan Maagalada Nairobi ee dalka Kenya ,taaso aheed in masraxa laga tuuro Fananada .
Muuqaalka la helay ayaa laga dhax arkaa Nimco Dareen oo qadaysa heesta Dareen Aax in gadaal uu kaga yimaado wiil dhalin yaro ah kadibna uu ka tuuro masraxa gabi ahaanba.
Dad badan ayaa waxaa la yaab ku noqotay dhibatada fanaanada loo geestay marka ay dawadeen muuqaalka fanaanada oo laga tuurayo masraxa .
Sido kale dadweynaha waxaa layaab ku noqotay in fananada ay ku heesaysay Cd horey ay ugu duubtay codkeeda ,waxaana taas cadayn u noqotay in fanaanada marka masraxa laga tuuray ay heesta iska sii socotay ilaa markii danbe Cd-ga heesta la damiyo.
Halkan Ka Daawo Nimco Dareen oo Masraxa Laga Tuurayo
Qalanjo Quruxdeed Taqaan, Quud Ma Gashaa??!! “Cajiib Baro Hablaha Cusub”